Cilmi baaris: Soonka ma wuxuu sare u qaadaa awoodda xusuusta maskaxda ee bini’adanka | Dayniile.com
Home Warkii Cilmi baaris: Soonka ma wuxuu sare u qaadaa awoodda xusuusta maskaxda ee...
Cilmi baaris: Soonka ma wuxuu sare u qaadaa awoodda xusuusta maskaxda ee bini’adanka
Qoraalka sawirka,Faa’iidada soonka uu leeyahay koritaanka maskaxda
Waxaan la aaminsan yahay in marba marka ka sii dambeysa, oo qofka ay da’diisa sii korodho, in awoodda xusuusta bini’adanka ay sii daciifto.
Balse qaar ka mid ah cilmi-baarisyada cusub ayaa tilmaamaya in aan wax ka qaban karno dhibaatadaas oo aan dib u soo celinno xusuusta, waxayna ku xiran tahay cadadda cuntada amaba cabitaanka aad cabeyso.
Dr. Gilles Yew oo ka tirsan Kulliyadda Kings ee London ayaa ka qayb qaatay cilmi-baaris lagu ururinayay macluumaad badan oo ku saabsan mawduucan.
Cilmi-baaris lagu sameeyay jiirka ayaa lagu ogaaday in marka tirada kaloriga la yareeyo, ay maskaxdu soo saarto unugyo cusub ama neerfayaal.
Nidaamkan waxaa lagu magacaabaa neurogenesis. Saynisyahannada waxay ogaadeen in xusuustooda ay hagaagtay.
Dhakhaatiirta Kulliyadda ee Kings ee kala ah Sandrine Thuret iyo Curie Kim, ayaa baaraya bal in ay taasi sidoo kale suurtogal ku tahay aadanaha.
43 qof oo uu ka mid yahay Dr. Gilles, oo ka tirsan Kings college ayaa loo soo xulay tijaabada.
Da’dooda waxay u dhaxaysay 45 ilaa 75 sano. Muddo afar toddobaad ah, waxaa dhammaantood la siinayey cunto uu ku yar-yahay maadada kaloriga.
Waxaa la siinayay inta u dhaxeysa 500-600 oo kalori, laba maalmood toddobaadkiiba. Shanta maalmood ee kalana waxay cunayeen intii uu cuni jireen maalmaha caadiga ah. Wayna soomayeen.
XIGASHADA SAWIRKA,YUICHIRO CHINO/GETTYIMAGES
“Meesha laga naafoobo waa maskaxda ee ma aha lugaha”
Sonkorta marka la joojiyo maskaxda maxaa ku dhacaya?
Qof walba xusuustiisa waxaa la tijaabiyay bilowga iyo dhammaadka afartii toddobaad ee tijaabada.
Waxaa tijaabadu looga gol leeyahay in lagu helo kala duwanaanshaha sawirradii horay loo qaaday iyo sawirrada cusub ee la qaaday.
Qof kasta oo ka qeyb qaatay tijaabada waxaa laga baaray dhiiga, kaas oo la hubiyay xaddiga borotiinka ku jira dhiigga.
Cilmi baaris ayaa lagu ogaaday in unugyo cusub iyo neerfayaal ay ka sameysmeen in qofka uu soomo iskana yareeyo kaloriga.
Natiijooyinka tijaabada ka soo baxay waa kuwo aad dhiirri gelin leh.
Waxaa la ogaaday in kala soocidda qaab-dhismeedka jirka dhammaan dadkii ka qeyb qaatay tijaabada ay soo hagaagtay, heerkooda maaddada klotho ee borotiinka ahna ay sidoo kale korodhay.
Tijaabadan ayaa muujinaysa in cunnada oo la iska yareeyo ama in la soomo, in ay awoodda xusuusta ee qofku kor qaadeyso.
Si kastaba ha ahaatee waxaa jiray waxyaabo ka duwan natiijadan oo dadka qaar lagu arkay. Tusaale, qaab dhismeedka jirka Dr. Gilles wuxuu noqday mid ka yar sidii hore, sidoo kalana heerka borotiinka Klotho isma beddelin.
XIGASHADA SAWIRKA,CAROL YEPES/GETTYIMAGES
Sida laga soo xigtay khubarada, waxaa jiri karo arrimo qaar oo keeni kara arrintan.
Hurdada wanaagsan waxay si dhow ula xiriirtaa neerfaha. Balse intii lagu jiray daraasadda, Dr. Gilles waxaa ku yarayd hurdada, waxaana suuragal ah in gaajada ay sabab u ahayd.
Dr Gilles wuxuu ahaa qofka ugu da’da yar ee ka mid ahaa kooxda sameynaysay tijaabada. Wuxuu si joogto ah u sameeyaa jimicsiga.
Waxaana yaraan doono saamaynta soonka wakhtiga gaaban ah. Hadda oo la baraayo sida dadka 60 sano jirka ah ay u sameeynayso tijaabada soonka.
Natiijooyinka waxay muujinayaan, in haddii aad ka mid tahay dadka waayeelka ah oo aadan jimicsi badan samayn karin, haddaba soonka laba maalmood toddobaadkii ayaa kor u qaadi kara xusuustaada.
Labadaas maalmood, haweenka waa in ay xaddidaan qaadashada kaloriga iyagoo ku soo celinaya 500, halka raggana looga baahan yahay inay ku soo celiyaan 600.
Shanta maalmood ee ka soo hartray toddobaadkana, waxaad cuni kartaa intii aad horay u cuni jirtay.
Previous articleGolaha wasiirrada Ra’isul wasaraaha Itoobiya Abiy Axmed iyo Qowmiyadaha ay ka soo kala jeedaan
Next articleXaalada Degmada Dayniile oo aad u kacsan isku hub aruursi weyn oo ka socota (daawo Sawirka qofka sida xun loo diday.(18sano hadan gaarin ka daawan)